ကျိကျိတက်ချမ်းသာတဲ့ အမီးရ်ခမ်း စျေးချိုတဲ့ ဂျုံကြမ်းမှုန့်တွေ ဘာကြောင့်ပေးတာလဲ – Android App Zone
ကျိကျိတက်ချမ်းသာတဲ့ အမီးရ်ခမ်း စျေးချိုတဲ့ ဂျုံကြမ်းမှုန့်တွေ ဘာကြောင့်ပေးတာလဲ
Posted on May 6, 2020 by thuneain
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူဒေလီ မြို့ကြီးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိတဲ့ Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အမီးရ်ခန်း နေထိုင်သတဲ့။ သူက အရမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုပဲ။ အခုလို covid ကာလမှာ သူက လူတွေကို ကြေငြာသတဲ့။ သူ ဂျုံကြမ်းအထုပ်ကလေးတွေ အများကြီးထုပ်ထားတယ် လာယူကြပါလို့ ပြောသတဲ့။
မြို့နေလူထုကလည်း အံဩသွားပြီး ဝေဖန်မှု့တွေ မြင့်တက်လာသတဲ့” ဒီလောက်ချမ်းသာတာ ဂျုံကြမ်းမှုန့်ပဲ ပေးတာလား? စေတနာ မကောင်းဘူး။ပေးချင်တယ်ဆို ဂျုံအနုမှုန့် ကောင်းတာပေးပါလား ? ပိုက်ဆံပေးပါလား ပေါ်ပင်လုပ်တာ ဘာလား ညာလားနဲ့ မကောင်းဘူးထင်ပြီး သွားမယူခဲ့ကြသူတွေလည်း များစွာရှိခဲ့ကြသတဲ့။
သို့သော် တကယ်စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ အတိဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ သူတွေကတော့ သွားယူသတဲ့။ စားစရာမရှိလို့ ဂျုံမှုန့်ထုပ်လေးတွေ သယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက် ပူရီတို့ ချာပါတီတို့ မုန့်လုပ်ဖို့အိတ်ကို ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ (အိတ်ထဲမှ ဂျုံမုန့်အကြား) ရူပီး ၁၀၀၀၀ (နှစ်သိန်းခန့်)သေချာစွာ ထည့်ထားပေးတာကို ဂျုံအိတ် သွားယူသူတွေ ရရှိသွားခဲ့ပါသတဲ့။
လူတွေကလည်း တအံ့တဩနဲ့ ဂျုံအိတ် မယူလိုက်ကြရ သူတွေကလည်း မချိတင်ကဲဖြစ် တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်ပြီး မင်းသားကြီးကို ဘာကြောင့် အဲ့ဒီလို လုပ်တာလဲမေးတော့ မင်းသားကြီးက… တစ်ခွန်းပဲပြန်အဖြေမှာ လောဘကြီးသူတွေ မျက်နှာပျက်သွားကြရသတဲ့မင်းသားကြီး ဖြေလိုက်ပုံက “တကယ်ကိုလိုအပ်သူတွေရ စေချင်တာပါတဲ့ ! ဘယ်လောက်များ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်သလဲ အမျိုးတို့ရေ
လင်ဂတ်ကို အသုံးချပြီး ရာသီကုန်မှာ (၁၃၅)ပေါင်အကျိုးအမြတ်ရဖို့ရှိနေတဲ့ ပရိသတ်
ထိုင်းမင်းသားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီး ရေပန်းစားနေတဲ့ မြန်မာမင်းသားချောလေး”June Wine
နာမည်ကြီးနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ မတော်လိုက်ရတဲ့ ရည်းစားအကြောင်း